အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အဖွဲ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (Transparency International) အဖွဲ့သည် အစိုးရမဟုတ်သည့် အန်ဂျီအို (NGO) အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များတွင် နိုင်ငံများ၏ အုပ်ချုပ်သူများ၊ ကုမ္ပဏီများ အဂတိလိုက်စားမှု ရှိမရှိ ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့် ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဗဟိုဌာနချုပ်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့တွင်တည်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံ ၇၀ ၌ အခြေချ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (TI)
ဘာလင်မြို့တွင် တည်ရှိသည့် မခိင်ဌာန (၅ လွှာ).
အဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ အများမှ ယုံကြည်ပေးအပ်ခဲ့သည့် အာဏာတစ်ခုကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံချခြင်းဟု ဖွင့်ဆိုပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ အုပ်ချုပ်သူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နေ့စဒူဝနေထိုင်သူတို့မှ အဂတိလိုက်စားမှုများ မရှိကြရန် ရည်ရွယ်သည်။ 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွင် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းနေထိုင်နေကြသူများမှ မိမိနိုင်ငံရှိ အဂတိလိုက်စားမှုများကို မည်သို့ ပယ်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစုပေါင်း ၁၀၀ကျော်ရှိသည်။ အနည်းငယ်သော လာဘ်စားမှုမှ ကြီးမားသော ခိုးယူမှုမျိုး၊ အဂတိလိုက်စားမှုအမျိုးမျိုးမှာ နိုင်ငံတစ်ခု နှင့် တစ်ခု ကွာခြားသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများတွင် ခန့်အပ်ထားသူများသည့် ပြည်တွင်းအကြောင်းကို ကောင်းစွာ နားလည်သူများဖြစ်ကြပြီး၊ နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အဂတိလို်က်စားမှုကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပပြောက်နိုင်ရန် နားလည်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများလည်းဖြစ်ကြသည်။
↑ Kumar၊ Brij (1998)။ Ethics in International Management။ Walter de Gruyter။ p. 208။ ISBN 978-3-11-015448-1။ Unknown parameter |month= ignored (အကူအညီ)
↑ "What We Do". Transparency International. Retrieved 2012-06-04.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_ပွင့်လင်းမြင်သာမှု_အဖွဲ့&oldid=513148" မှ ရယူရန်
၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။